ဖုန်းရေ၌ခဲ့လျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည် - ဖုန်းကို - 2019
အဆိုပါ Windows ကို operating system ကိုတစ်ဦးအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်အံဝင်ခွင်ကျအမျိုးမျိုးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကပြဿနာများအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူအစစ်အမှန်ပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ပစ္စည်းကုဒ် 0x80004005 နှင့်အတူအမှားအယွင်းများ၏ဖျက်သိမ်းရေးမှမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။
အများစုမှာမကြာခဏ windose ကို update အခါပျက်ကွက်မှုဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ထိုသခင်နှင့်အတူကြုံတွေ့ခဲ့ကြနှင့်သင်ဖိုင်တွေရဲ့ attribute တွေသို့မဟုတ်ဒေသခံတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်၏ output ကိုပြောင်းလဲစေခြင်း, optical drive ကို၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသောအခါ။ Next ကိုကျနော်တို့အမှားအသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများဆွေးနွေးရန်တို့ကိုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းပြချက် 1: Antivirus ကိုဆော့ဖျဝဲ
Third-party developer များအားဖြင့် antivirus ကိုမကြာခဏအစစ်အမှန် Hooligans ကဲ့သို့သောစနစ်ပြုမူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, system files ကိုသံသယဖြစ်စေရန်သော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြေရှင်းချက်အချိန်သို့မဟုတ်ပါကပြန်လည်ပေါ်တွင် program ကို disable လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက်တည်ရှိသည်: အ installation ကိုများသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ဖြစ်သည်လျှင်, ဖယ်ရှားရေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစက္ကူအောက်က link ကိုထုတ် ထား. သင်တို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖတ်ပါ (သင့်ပါတယ်) နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်: သင်၏ကွန်ပျူတာကနေ Antivirus ကိုဖယ်ရှားခြင်း
အကြောင်းပြချက် 2: မှား firewall settings များ
Windows Firewall ကိုအွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအမြဲမှန်ကန်သောမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ပါတယ်။ options နှစ်ခုရှိပါတယ်: Restart လုပ်ပြီး configure သင့်လျော်သောဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဝင်လာသောဆက်သွယ်မှုများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပိတ်ထားပါ။ ဤအခြေလှမ်းများသာယာယီပြဿနာကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်အံ့သောငှါသတိပြုပါ။ အမှားပြန်ပေါ်လာပြန်ပြီးအချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်, ထို့နောက်ကံမကောင်း, သင်က Windows ကို reinstall လုပ်ဖို့ရှိပါက။ သင်လုပ်နိုင်သည်, သင်တန်း, Firewall ကို disable လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာသိသိသာသာစနစ်၏လုံခြုံရေးကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
သတိ၏နောက်ထပ်စကားလုံး: သင်ကဒီအမျိုးမျိုးသောပြဿနာများ entailing applications များ၏ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှု၏ setting ကိုအတူ option ကို, သင်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါကြောင်း antivirus ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုနေလျှင်။ နောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုရပ်တန့်သည်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို turn off, ဒါကြောင့်လာမယ့်နည်းလမ်းကိုမသွားပါလိမ့်မယ်။
ပွင့်လင်းတန်း "Run ကို" သော့ ဦးဝင်း + R ကို နှင့်လယ်ပြင်၌ "ပွင့်လင်း" အမိန့်ရိုက်ထည့်ပါ
ကျနော်တို့န်ဆောင်မှုများ၏စာရင်းထဲတွင်ရှာကြသည် "Windows Firewall ကို" နှင့် start-up type ကိုကြည့်ပါ။ ကနေမတူခဲ့လျှင် "အလိုအလျောက်"ဒါဟာညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုအပေါ်နှင့်ဤ Drop-down list ထဲမှာကို Double-click နှိပ်ပြီးသင့်လျော်သောတနျဖိုးကိုရွေးပါ, ပြီးတော့စာနယ်ဇင်း "Apply" နှင့် Properties window ကိုပိတ်ပါ။
Next ကိုကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကို restart ပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှုကိုပြုရပါမည်ကို၎င်း, startup type ကို setting ကိုမလိုအပ်လျှင်။ ဤသည်ကိုအောက်ကပုံတွင်ပြထားတဲ့ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကို disable စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
သွားပါ "Control Panel ထဲက" နှင့် Firewall ကို setting များကိုအပိုင်းကိုဖွင့ ်. ။
link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့် Options".
ဝင်လာသောဆက်သွယ်မှုများအတွက် tab ကို settings ကိုမှ Switch, ပထမဦးဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကိုကို select, ထို့နောက်စာရင်းကိုချ scroll, ကိုင် SHIFT , နောက်ဆုံးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤ action အားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့, ရှိသမျှအချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ "Disable လုပ်ထားစိုးမိုးရေး".
အဆိုပါ Preferences ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးစက်ကို reboot ။
အကြောင်းပြချက် 3: အလုပ်အကိုင် "အသုံးပြုသူအကောင့်ထိန်းချုပ်ရေး"
ကို C "User Account Control" (UAC) ကအခြေအနေ firewall က၏အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - အချို့ကိစ္စများတွင်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ဘူး။ သို့သော်အရာအားလုံးနည်းနည်းလွယ်: ကနိမ့်ဆုံးမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းကိုလျှော့ချဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
မီနူးဖွင့်လှစ် "Start" နှင့်အကောင့်ရုပ်ပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ UAC setting များကိုဆက်လက်။
တန်ဖိုးရန်, အောက်ခြေဖို့ slider ကိုချန်လှပ် "အကြောင်းကြားဘယ်တော့မှမ" နှင့်စာနယ်ဇင်း OK ကို.
အဆိုပါ Preferences ကိုပြတင်းပေါက် reboot လုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
အကြောင်းပြချက် 4: အဘယ်သူမျှမစီမံခနျ့ခှဲသူအခွင့်အရေးများ
Administrator လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာ operating system ကိုအချို့အရေးကြီးသောအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ "uchetki" နှင့်ပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်ဆိုပါကယနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြရှိသူများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် Exit ကိုသုံးနေသောခေါင်းစဉ်: ရရှိနိုင်လျှင်သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူအသစ်ဖန်တီးနှငျ့သငျအလုပ်လုပ်နေကြရသောအောက်မှာအကောင့်အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" အကောင့်ရိုက်ထည့်ပြောင်းရန်။
ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့သည်အတိုင်း, အသေးစိတ်အတွက်က Windows ပေါ်မှာအသုံးပြုသူများအကြား switching ကိုဖော်ပြရန်မည်မဟုတ်: မှာ "Start ကို" မီနူးမှတဆင့်စနစ်၏လုံလောက်စွာရရှိရန်, ပြီးတော့နောက်တဖန်ဝင်ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသော "uchetki" အောက်မှာ။ သင်တို့သည်လည်းပိတ်ပွဲအစီအစဉ်များမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Windows7အသုံးပြုသူတစ်အကောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
အကောင့်သစ်အတွက်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလည်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဤအရာမှနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "Control Panel ထဲက"ထိုအခါက start menu ကနေ။
Read more: Windows7အသုံးပြုသူအသစ်ဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း "uchetki" ၏အမျိုးအစားပြောင်းခြင်းသည်:
ကျနော်တို့ဖော်ပြချက်အကြောင်းရင်း3၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုအကောင့်မှဆက်လက်နှင့်ပုံရိပ်မှာဖော်ပြထားသော link ကို click လုပ်ပါ။
switch သည် Set "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" နှင့်သင့်လျော်သောနာမည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်တဦးတည်းယခင်ကသတ်မှတ်ပြီးပါပြီလျှင်, admin ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပေမည်။
အကြောင်းပြချက် 5: ပဋိပက္ခ Update ကို
အောက်ပါဆွေးနွေးမှု OS ကို update လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်အာရုံစိုက်။ ပြီးသား installed ကြသည်တချို့က packages များသစ်တွေ၏ installation တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုမှာ, KB2592687 နှင့် KB2574819။ သူတို့ဟာစနစ်ကနေဖယ်ရှားရမည်။
Read more: Windows7ကိုများအတွက် update ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
SP1 ကို install ပြဿနာများ,
Windows7ကို SP1 မှအဆင့်မြှင့်တဲ့အခါဒီအမှားကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာချိတ်ဆက် Third-party ကွန်ယက်ကိုယာဉ်မောင်းများ၏အများဆုံးအရေအတွက်တာဝန်ရှိ parameter သည်အတွက် Registry ကိုပြောင်းလဲမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
မီနူးကို အသုံးပြု. Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ "Run ကို" (ဦးဝင်း + R ကို) အဖွဲ့သည်
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control ကို ကွန်ယက်
ညာဘက် box ထဲမှာကျနော်တို့က parameter သည်အပေါ်ယွမ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ကျွန်တော်တန်ဖိုးမသတ်မှတ် 14 နှင့်စာနယ်ဇင်း (ဒါဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်) OK ကို.
အဆိုပါကိုသွားပါ "ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်စင်တာ" မှ "Control Panel ထဲက".
လင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြောင်းလဲခြင်း adapter settings ကို".
ယင်းနောက် (connection တစ်ခုချင်းစီ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသွားယွမ် - Properties ကို).
tab ကိုသို့ပြောင်းရန် "ကွန်ယက်" လူအပေါင်းတို့ Third-party အစိတ်အပိုင်းများကိုပိတ်ထားပါ။ ဤစကားသည် "မိုက်ကရိုဆော့ဖ" ၏အမည်များရှိသည်မဟုတ်နှင့်ကို TCP / IP protocol များမဟုတ်ကြဘူးသမျှသောပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ QoS Packet Scheduler ကို turn off ရန်မလိုအပ်လျက်, စံမောင်းသူလည်းမရှိ, အရာများ၏အမည်များရုရှား (သို့မဟုတ်သင့်မိခင်ဘာသာစကား) သို့ဘာသာပြန်ထားသောပါပြီ။ Third-party အစိတ်အပိုင်းများဥပမာပုံရိပ်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်လျော်သောစစ်ဆေးမှုများသေတ္တာကို disable နှင့် button ကိုနှိပ် OK ကို.
သငျသညျကွန်ယက်အစိတ်အပိုင်းများကို install လုပ်မရသို့မဟုတ်တိကျစွာ Third-party များမှာသူတို့ထဲကအရာဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ထိုပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးလျှင်, တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းထွက်မနိုင်လျှင် - Windows ကို reinstall ပြီးတော့ upgrade တစ်ဦး "စင်ကြယ်သော" စနစ်အားရှိပါတယ်။
ယနေ့သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ငါတို့သည်သူတို့ကိုအများကြီး Windows7အတွက် 0x80004005 အမှားအသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများဖျက်သိမ်း, နှင့်တိကျသောနည်းလမ်းများတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသုံးပြုရပါမည်။ ဒါကြောင့်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ပေါ်စေအတိအကျဘာကိုမသိရလျှင်တူညီသောအမှု၌, ဒါကြောင့်သူတို့ကဆောင်းပါးထဲမှာစာရင်းသွင်းထားတဲ့အတွက်အမိန့်မှလိုက်နာရန်, ရှိသမျှနည်းလမ်းတွေကြိုးစားကြရပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (သြဂုတ်လ 2019).